Liverpool Oo U Dhaqaaqeysa Soo Xero Gelinta Daafac Dhexe Balse Waxa Ay Loolan Kala Kulmi Doontaa Kooxaha Juve Iyo Inter Milan - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Liverpool Oo U Dhaqaaqeysa Soo Xero Gelinta Daafac Dhexe Balse Waxa Ay Loolan Kala Kulmi Doontaa Kooxaha Juve Iyo Inter Milan
Liverpool ayaa isku dayday intii uu furnaa suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada xagaagii dhamaaday inay lasoo saxiixato daafac dhexe iyada oo dooneysay inay ku daboosha baahida dhanka daafaca ka heysata.
Jurgen Klopp waxa uu si aad ah u doonayay inuu lasoo saxiixdo xidiga u dhashay dalka Holland Virgil Van Dijk balse kooxda Reds ka waxa ay candhuufteeda dib u liqday kadib markii ay kooxda Saints warqad dacwad ah ka gudbisay kooxdaas iyada oo dooneysay inay ka ceshato daafaceeda birta ah.
Balse macalinka u dhashay dalka Germany ayaa doonayo marka uu suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada furmo inuu lasoo saxiixdo hal ama labo ciyaaryahan oo ka ciyaari karto daafaca dhexe, waxaana soo baxayo warar sheegayo in kooxda reer Merseyside ay u dhaqaaqeyso soo xiro gelinta daafaca kooxda SS Lazio Stefan de Vrij.
de Vrij waa ciyaaryahan ay Liverpool ceyrsaneysay saxiixiisa xagaagan balse macalin Klopp ayaa ka door bidayey inuu lasoo wareego Van Dijk, Ciyaaryahankan sidoo kale u dhashay dalka Holland waxa uu dhacayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda ka dhisan caasimada dalka Talyaaniga xagaaga ina soo aadan waxa uuna si bilaash ah ugu biiri karaa kooxda uu doono.
Liverpool ayaa dooneysa inay u dhaqaaqdo saxiixa Stefan de Vrij bisha January balse waxa ay loolan xoogan kala kulmaysaa kooxaha Juventus iyo Inter Milan oo doonayo saxiixa sidoo kale.